Bangladesh · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Bangladesh tamin'ny Jolay, 2012
Bangladesh: Nahazo Vokatra Tsara Ireo Zazavavy Na Dia Teo Aza Ny Sakana
Fanabeazana 24 Jolay 2012
Araka ny valin'ny fanadinan'ny Ambaratonga Faharoa Ambony any Bengladesh dia nanao tsaratsara ny zazavavy noho ny zazalahy. Taona vitsy lasa izay, niakatra ny taham-pahafahan'ny mpianatra zazavavy amin'ny fanadinam-panjakana noho ny dingana maro noraisin'ny governemanta.
Bangladesh: Lasa Renivohi-kolontsaina Islamika i Dhaka
Fivavahana 23 Jolay 2012
Notokanana ho renivohi-kolontsaina Islamika ny renivohitr'i Bangladesh, Dhaka, miaraka amin'ireo tanàn-dehibe anankiroa hafa. Ny Fikambanana Islamika momba ny Fampianarana, ny Siantifika ary ny Kolontsaina (ISESCO), sy ny departemanta fanampiny an'ny Fikambanana Konferansa Islamika (OIC), no nanambara izany vao haingana. Hatramin'ny taona 2004, efa nodinihan'ny ISESCO izany fandaharan'asa isan-taona izany mba hanajana ny...
Bengladesy: Mampianatra ny Zaza Madinika Hiteny Teny Vahiny sy Handainga Ve Ny Sarimiaina?
India 05 Jolay 2012
Niteraka adihevitra tany Bengladesy ny sarimiaina nalefan'ny Fantsom-pahitalavitra Disney India. Maro no mitaraina fa manosika ny zaza hianatra ny teny Hindi an'ny tany mifanila vodirindrina amin'i Inde, ity sarimiaina ity, ary mahatonga azy ireo handainga ny fandefasana ela loatra ity fandaharana sarimiaina Japoney Doraemon ity.